कुबेतमा नेपाली चेलीलाई यसरी यौ”न अ’खडा सम्म यसरी पुर्याइन्छ (सुन्नुस बा’र्गेनिङ गरेको अडियो ) – Patrika Nepal
मंग्सिर ८, २०७८ बुधबार 80
वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्तव्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न । तर यसरि बिदेशिने युबा हुन या युवती आफ्नै नेपाली द’ला’लहरुबाट ठगिने र विभिन्न समस्यामा पनि पर्ने गरेका छ्न, यस्तै घ”टना कुबेतमा पनि घटे”को छ ।
Prevछोरीले टिकटकबाट लाखौ कमाउन थालेपछि बुवा साउदीबाट फर्किए, कमाएको पैसा छोरीले यस्तो गरिन (भिडियो हेर्नुस)
Nextकोरिया उड्नै लागेका ८३ युवालाई ठग्ने होटलमा श्रममन्त्रीको छापा, ‘दलाल’ अजय सोडारी पक्राउ
यी हुन् तालिवानका प्रमुख नेताहरू, कसको जिम्मेवारी के ?
कुमारित्वको प्रश्न ? जहाँ सुहागरातको दिन सेतो च्यादर ओछ्याइन्छ किन ?…
गुडिरहेको बसमाथि ढुंगा ख’स्दा ४०जनाको मृ’त्यु
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (666)
६.	चितवनमा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि क’ण्डम, ग’र्भनि’रोधक अस्थायी साधनको माग (61)